Demonic Dave Grohl dia nanomboka namono ny mpikambana rehetra tao amin'ny The Foo Fighters tao amin'ny horonantsary 'Studio 666'
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Demonic Dave Grohl dia nanomboka namono ny mpikambana rehetra tao amin'ny The Foo Fighters tao amin'ny horonantsary 'Studio 666'
Mandrakizay any amin'ny helo
by Trey Hilburn III Janoary 11, 2022
by Trey Hilburn III Janoary 11, 2022 4,753 hevitra
Noho izany, nanatevin-daharana ny lalao mampihoron-koditra ny Foo Fighter's. Marina izany, ry zalahy izay tena malaza amin'ny fanapotehana gitara dia hametraka ny sling amin'ny sarimihetsika metaly demonia, Studio 666.
Sarotra ny rock n' roll ry zalahy. Ny indostria dia tapaka amin'ny helo. Marina indrindra izany raha ao amin'ny Foo Fighters ianao ary manandrana mirakitra ny rakikira fahafolo ao anatin'ny rindrin'ny studio iray feno zava-mahagaga.
Ny synopsis ho an'ny Studio 666 mandeha toy izao:
Ao amin'ny STUDIO 666, ny tarika rock malaza Foo Fighters dia nifindra tao amin'ny tranoben'ny Encino feno tantara rock sy horonan-tsarimihetsika mba handrakitra ny rakikira faha-10 nandrasan'izy ireo. Indray mandeha tao an-trano, i Dave Grohl dia mahita ny tenany miady amin'ny hery mihoatra ny natoraly izay manohintohina ny fahavitan'ny rakikira sy ny fiainan'ny tarika.
Ny Studio 666 dia tonga amin'ny teatra amin'ny 25 febroary vidio eto ny tapakilanao.